Israeri inoteterera kubatsirwa sezvo moto mukuru wemusango unopisa kunze kweJerusarema
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israeri inoteterera kubatsirwa sezvo moto mukuru wemusango unopisa kunze kweJerusarema
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Ministry yekune dzimwe nyika yeIsrael yakati yakasvikira kune mamwe marudzi akati kuti vabatsirwe, vachitsvaga rutsigiro rwemhepo nekukurumidza kurwisa moto.
Iko-kweku-kutonga blaze kwakaparadza matondo ehuni nemapurazi
Moto wemusango uri kutyisidzira misha iri pedyo.
Moto wakabuda nemusi weSvondo uye nanhasi hausati waiswa pasi pesimba.
Moto wekunze-kwekutonga wakatsamwa kunze kweJerusarema waive wakurudzira hurumende yeIsrael kudaidzira rubatsiro rwekunze.
Moto muhombe wemusango watoparadza mafuro emiti nemapurazi, uchipisa angangoita 4,200 17,000 maeka (XNUMX mahekita) epasi uye wave kutyisidzira misha yakati kuti iri pedyo.
Vamwe vashandi vekudzimisa moto makumi manomwe neshanu uye ndege gumi vaive vachirwisa moto pedyo Jerusarema neMuvhuro, maererano neIsrael Fire and Rescue Authority. Moto wakapaza zuva rapfuura uye hausati waiswa pasi pesimba.
Mavhidhiyo kubva pasi anoratidza mwoto wakanyanya unopisa padivi pemigwagwa, vatyairi vachifanirwa kutyaira kuburikidza ne infernos.
Ndege diki-dzemaitiro echirimwa dzakaonekwa dzichirasira machena machena macomputer anodzora moto pazvikomo zvakakomberedza Jerusarema nechinangwa chekumisa moto.
Nharaunda dzinoverengeka munzvimbo iyi dzakabviswa, kusanganisira dzimba mumusha weGivat Yearim, uri kumadokero kweJerusarema. Mifananidzo kubva pachiitiko inoratidza kuti zvimwe zvivakwa mukati mekugara zvakatokanganiswa nemoto.
Moto uyu unotyisidzirawo chipatara chikuru munyika, Hadassah Medical Center, iri munzira yemoto. Mapurisa eJerusarema akaudza vezvenhau veIsrael kuti vanga vachishanda nechipatara kubatsira vashandi kugadzirira zvingangobviswa. Kubva nemusi weMuvhuro manheru, mapurisa akaraira nzvimbo iyi kuti itange kuchenesa nzvimbo yayo yekupaka kuitira kuti vabude, kunyange hazvo pasati paziviswa.
IzirayeriMinistry yekudyidzana nedzimwe nyika yakati yakasvika kune mamwe marudzi akati kuti vabatsirwe, vachitsvaga rutsigiro rwemhepo nekukurumidza kurwisa moto. Gurukota rinoona nezvekunze kweGreek, Nikos Dendias akaudza mumwe wake wekuIsrael, Yair Lapid kuti nyika "yaizobatsira nepainogona napo," sekureva kwebazi iri. Greece pachayo yakarwadziswa zvakanyanya nemoto unopisa unopisa, nehurumende yayo ichiramba yakatarisana nekushoropodzwa pamusoro pemhinduro yenyika kudambudziko.